musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Rebhanoni Breaking News » Rebhanoni rinosviba mushure mekuzara kwesimba magetsi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Rebhanoni Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mafuta maviri akapera mafuta nekuti hurumende yaishaya mari yekune dzimwe nyika yekubhadhara vekunze vanopa magetsi. Ngarava dzaitakura mafuta negasi dzainzi dzakaramba kumira muRebhanoni kudzamara kubhadhara kwekutumirwa kwavo kwaitwa mumadhora ekuUS.
Mamiriro ekugashira magetsi aive atove akaomarara muRebhanoni pasati padzima magetsi.
Zviremera zvichaedza kushandisa matura emafuta emauto kuitira kuti magetsi agadzirise mashandiro.
Zvinoenderana nenzvimbo dzemunharaunda, kudzimwa kwemagetsi muRebhanoni kunogona kutora "kwemazuva akati wandei".
Lebhanoni yakatarisana nekudzimwa kukuru kwemagetsi mushure mekunge maviri emagetsi makuru munyika akamanikidzwa kudzima nhasi, nekuda kwekushomeka kwakanyanya kwemafuta.
Sekureva kwevakuru veLebanese, kuda kudzima kudzima magetsi munyika ine njodzi-yemamiriyoni matanhatu inotarisirwa kuenderera 'kwemazuva mashoma'.
Deir Ammar neZahrani magetsi emagetsi akange achipa 40% yemagetsi eRebhanoni, sekureva kwavo, Electricité Du Liban.
"Mambure emagetsi eLebanon akamira zvachose kushanda masikati nhasi, uye hazviite kuti achashanda kusvika Muvhuro unotevera, kana kwemazuva akati wandei," akadaro mukuru uyu.
Zviremera zvehurumende zveLebanon zvichaedza kushandisa matura emafuta emauto kuitira kuti magetsi agadzirise mashandiro, asi yambira kuti hazvingamboitika munguva pfupi iri kutevera.
Mafuta maviri akapera mafuta nekuti hurumende yaishaya mari yekune dzimwe nyika yekubhadhara vekunze vanopa magetsi. Ngarava dzaitakura mafuta uye gasi zvinonzi zvakaramba kumira Rebhanoni kudzamara kubhadhara kwekuendesa kwavo kwaitwa mumadhora ekuUS.
Pondo reLebanese rakanyura ne90% kubvira 2019, pakati pezvematambudziko ehupfumi, ayo akawedzeredzwa nekusanzwisisika kwezvematongerwo enyika. Mapato anokwikwidza haana kukwanisa kuumba hurumende mumwedzi gumi nematanhatu kubva pakaitika kuputika kwakaipa pachiteshi che Beirut, kungowana chete nzvimbo yaunowirirana mushure mekubvumidzwa kwekabati idzva munaGunyana.
Mamiriro ezvinhu ekupa magetsi anga akanyanya munyika pasati padzimwa magetsi, vagari vachikwanisa kuwana magetsi kwemaawa maviri chete pazuva.
Vamwe vagari vanga vachivimba nemagwenya edhiziri akazvimiririra kuti vape magetsi mudzimba dzavo, asi michina yakadai iri kushaikwa munyika.